Vaovao - Fampisehoana taorian'ny tsy fahombiazan'ny lohan'ny varingarina
Raha simba ny fiara eo am-pamiliana dia misy antony maro mahatonga ny tsy fahombiazana, ary mety tsy hahomby ny ampahany rehetra. Inona no hitranga amin'ny tsy fahombiazan'ny gasket lohan'ny varingarina? Homen'ny mpanamboatra anao ny toe-javatra amin'ny antsipiriany. Avelao aho hampiditra azy.
Satria ny gasket varingarina dia misy asan'ny famehezana rehefa ampiasaina, raha tsy mahomby ilay ampahany dia azo antoka fa hampiasa tsy ara-dalàna. Raha tsy azo antoka ny vokan'ny famehezana azy, dia hivoaka ny menaka sy rano voasakana, izay hisy fiatraikany amin'ny fandidiana ny faritra hafa.
Misy tabataba tsy mahazatra amin'ny ankapobeny; miboiboika ao anaty fitoeran-drano sy tankina fanampiana rano amin'ny fiara; malemy ny familiana ny fiara; setroka fotsy ao amin'ny fantsom-pamoizanan'ny fiara, izay mety koa vokatry ny tsy fahombiazan'ny vatan-tsolika. Ara-dalàna ireo trangan-javatra ireo, saingy hanimba ny filaminan'ny fiara izany, ka tsy maintsy amboarina sy soloina ara-potoana.